Immisa ayaan u baahanahay in aan addeecno Sharciga? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Mararka qaarkood waxaa la i weydiiyaa hadii Ilaah runtii filaayo oo uu dalbado 100% addeecid. Waxaan ku doodi karaa oo ku saabsan tan una dhexeeysa dadka, laakiin run ahaantii su’aashan waxaa ka jawaabi doonaa Ilaah, annagu ma’nihin kuwii ka jawaabi lahaa, sidaa darteed halkan waxaan ka soo xulay qaybo ka mid ah Tawreedka oo inoo sheegaya heerka uu le’eg yahay addeecidda Sharciga kaasoo loo baahan yahay, lana filaayo. Waxay ku jiraan hoos. U fiirso sida badan aayaadkiisa iyo sida cad ay yihiin. Aayaadkiisa ayaa waxaa ka buuxa weedho sida ‘taxadir leh u raac’,’DHAMAAN Ammarrada’,”Dhamaan qalbigaaga”,”Had iyo jeer ku amrayaa”,”Wax walba”,”Ammarradii oo dhan”, “Si buuxda u addeec”, “Erayada oo dhan”, “Dhegayso dhamaantood”.
Tani caadiyan ee 100% addeecidda ma doorsoomin, mana isbedelin nabiyadii dambe toona. Ciise Masiix (NNKH) ayaa ku sheegay Injiilka:
17 Ha u malaynina inaan u imid inaan sharciga ama qorniintii nebiyada baabbi’iyo; uma aan iman inaan baabbi’iyo, laakiin waxaan u imid inaan wada oofiyo 18 Runtii waxaan idinku leeyahay, Intaan cirka iyo dhulku idlaan, xaraf ama dhibic keliya ka idlaan mayso sharciga ilaa ay wada noqdaan. 19 Sidaa darteed kii jebiya qaynuunnadan kuwa ugu yar midkood, oo sidaas dadka u bara, waxaa loogu yeedhi doonaa kan uga yar boqortooyadii jannada, laakiin kii yeela oo bara, waxaa loogu yeedhi doonaa kan weyn boqortooyadii jannada.
Markaasaa Nebi Maxamed (NNKH) waxa uu Xadiis ku yidhi:
Qisadii Abdullah Ibn Cumar uu soo weriyey:… Koox Yuhuudda ayaa u timid oo ku casuumay Rasuulka Alle (NNKH) in Quff. …Waxay ku yidhaahdeen: ‘Cabul Qaasim, mid ka mid ah raggayaga ayaa ka sinaysatay qof dumar ah; sidaa darteed ku dhawaaq ninkanu xukunka iyaga ku soo qor’. Waxay u dhigeen barkin Rasuulka Alle (NNKH) oo ku dul fadhiistay oo wuxuu ku yidhi: “keena Tawreedka”. ka dibna waa loo keenay. Ka dibna wuxuu iska qaaday barkintii hoostiisa taalay isagoo dulsaaray Tawreedka isagoo leh: “Waxaan rumeysanahay adiga oo dhexdaada ku yaal iyo isaga kaa shaaca ka qaaday” sunankiisa Abu Daawuud Book 38, No.4434:
Oo taasoo keliya ayaa macno samaynaysa. Ilaah ayaa diyaarinaya Jannada – iyo tani waa meel qumman oo quduus ah – halkaas oo uu yahay. Halkaas askar ma jiri doonaa, ciidamo aan lahayn, handarraabbyo aan lahayn – oo aan lahayn waardiyayaasha aan haysano maanta si ay inooga badbaadiyaan dembiyada midba midka kale ilaaliyo. Taasi waa sababta ay u noqon doontaa janno. Laakiin waa inay sii ahaataa meel kaamil ah, oo ay keliya geli karaan dadka kaamilka ah – kuwii Raacay ‘dhan’ ammarrada ‘Had iyo jeer’, ‘Si buuxda’, iyo ‘in wax walba’.
Halkan waa waxa Tawreedku uu leeyahay oo ku saabsan ilaa xadka addeecidda sharciga loo baahan yahay .
39 Oo wuxuu idiin noqonayaa faraq aad fiirsataan oo aad Rabbiga amarradiisii oo dhan ku xusuusataan inaad samaysaan, si aydaan u raacin qalbigiinna iyo indhihiinna aad daacadnimola’aan ku raaci jirteen,
Sharciga Kunoqoshadiisa 5:27
Sharciga Kunoqoshadiisa 11:13
13 Oo haddaad aad u dhegaysataan amarrada aan maanta idinku amrayo oo ah inaad Rabbiga Ilaahiinna ah jeclaataan oo aad isaga ugu adeegtaan qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan
Sharciga Kunoqoshadiisa 11:32
Sharciga Kunoqoshadiisa 12:28
Sharciga Kunoqoshadiisa 13:18
Sharciga Kunoqoshadiisa 15:5
5 haddii keliyahoo aad aad u dhegaysataan codka Rabbiga Ilaahiinna ah, oo aad dhawrtaan oo yeeshaan amarkiisa aan maanta idinku amrayo oo dhan.
Sharciga Kunoqoshadiisa 26:14
Sharciga Kunoqoshadiisa 28:1
28 Oo haddaad aad u dhegaysataan codka Rabbiga Ilaahiinna ah, oo intaad xajisaan aad yeeshaan amarradiisa aan maanta idinku amrayo oo dhan, Rabbiga Ilaahiinna ahu wuxuu idinka wada sare marin doonaa quruumaha dunida oo dhan.
Sharciga Kunoqoshadiisa 28:15
15 Laakiinse haddaydnan dhegaysan codka Rabbiga Ilaahiinna ah, inaad xajisaan oo aad wada yeeshaan amarradiisa iyo qaynuunnadiisa aan maanta idinku amrayo, markaas inkaarahan oo dhammu way idinku soo degi doonaan oo idin soo gaadhi doonaan.
Sharciga Kunoqoshadiisa 30:2
Sharciga Kunoqoshadiisa 30:8
Sharciga Kunoqoshadiisa 30:10
Sharciga Kunoqoshadiisa 32:46